Sudan oo u hanjabtay Koonfurta Sudan - BBC News Somali
Sudan oo u hanjabtay Koonfurta Sudan
11 Abriil 2012
Lahaanshaha sawirka x
Image caption Dagaallo ayaa dhexmarayay labada dhinac toddobaadyadii ugu danbeeyay
Dowladda Suudaan ayaa ka jawaabtay wax ay ugu yeertay gardaro cad oo kaga timid Koonfurta Sudan. Sida uu sheegay Afhayeenka ciidamada waxa ciidanka koonfurta Sudan ay qabsadeen meesha saliidda laga qodo ee la yiraahdo Heglig.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu darneyd muddo laba toddobaad ah oo iska hor imaadyo laga cabsi qabo in markale ay dagaal ku laabtaan ah ay socdeen.
War qoraal ah oo ay soo saartey dowladda Sudan ayay ku sheegtey inay xaq u leedahay jawaab inay ka bixiso weerarka koonfuurta Sudan. Xukuumadda Khartoum waxay sheegtey inay adeegsan doonto waddo kasta oo sharci ahaan u furan.
Laakiin waxay uga digtey Koonfuurta Sudan in dhaqanka gardarada ah ee ay la timid aaney waxba ka faaidi doonin, ayna ka dhaxli doonto burbur iyo hoog ay u horseedo shacabkeeda.
Qirashada afhayeenka ciidamada Sudan uu ku qirtey in ciidamada Koonfuurta Sudan ay si buuxda gacanta ugu hayaan ceelasha shidaalka ee Heglig iyo magaalada inteeda kale ayaa loo arka mid muhiomaddeeda leh.
Markiiba shacabka Sudan waxay walaac ka muujinayaan saameynta arintani ku yeelan karto dhaqaalaha dalkooda.
Afhayeenka milateriga koonfuurta Sudan, waxaa uu ka gaabsadey inuu isticmaalo ereyga ah inay qabsadeen dhul Sudan leedahay, balse waxaa uu hadalkiisa u dhigey in ciidamadooda ay dib u baacsadeen kuwa Sudan oo weerar soo qaadey, intii ay bacsashada ku jireena ay socdeen ilaa Heglig.
Warar madax banaan oo soo baxaya ayaa sheegaya in qeyb ahaan goobtaasi ay gacanta ugu jirto Koonfuurta Sudan.
Heglig waxaa loo aqoonsan yahay inay leedahay Sudan, walow Koonfuurta Sudan ay taasi ka soo horjeedo, oo iyana ay sheegato lahaanshaheeda.
Dagaalkan oo qarxey laba toddobaad ka hor, ayaa waxaa uu dhaliyey in dib loo dhigo kulan madaxeed labada dal ay isugu imaan lahaayeen, kaas oo looga gol lahaa xalinta dhibaatooyinka labada dal u dhexeeya.
Ka hor intaaney Koonfuurta Sudan ka go'in Sudan inteeda kale sannadkii la soo dhaafey, waxaa lagu guuldareystey in la xaliyo arrimo ay ka mid yihiin amaanka iyo lahaandhaha goobaha shidaalka laga qodo.